Marera waa maxay sababta uu ugu gafey Ra'iisal wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed? - Ogaden24 | Ogaden24
Marera waa maxay sababta uu ugu gafey Ra’iisal wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed?
Abiye Ahmed oo kulankii barlamanka maalmo kahor ka hadlayay ayaa dhaliilo usoo jeediyay xisbiyada doorashada diiday innay ka qayb galaan, wuxuuna ku tilmaamay kuwo arrimahan iska caadaystay.
Abiye Ahmed wuxuu tusaale usoo qaaday ninka ordaya tartanka iyo midka ka caawiya ee jidka ku hagaya, wuxuuna sheegay in kuwa caawinaya aysan marnaba guul rabbin, haddii tartama la dhahana aysan yeelaynin maaddama aysan khibrad u lahayn.
“Doorasgadan kama liidato kuwii hore, haddaysan khibrad la’aan jirin”, ayuu yidhi Abiye Ahmed.Intaas un kuma koobin balse Abiye Ahmed wuxuu sheegay inuu xisbiyada Oromada ergo udiray, wuxuuna sheegay inuu usoo jeediyay sidday ugacan qaban lahaayeen xisbiyadan.
Abiye Ahmed wuxuu ku goodiyay in doorashada la qabanayo, waxkasta oo yimaaadaba.
Guddoomiyaha xisbiga OFC, Merara Guddina oo eedaymaha Abiye Ahmed ka hadlayay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay, wuxuuna sheegay in xisbiga Barwaaqo udiyaarsanayn in doorasho xor ah qabto. Merara wuxuu sheegay in shuruudo ku xidheen doorashada, sidda in lasii daayo siyaasoyinta ka xidhan ee Jawhar Mohamed ugu horeeyo, in loo furo xafiisyada xisbigan laga xidhay iyo in wada haddal nabbadeed oo guud dalka laga qabto.